Nagu saabsan | Kulan Ciyaaraha Agabka iyo Xafiiska PC Accessories Brand
U oggolow qof walba inuu ku raaxeysto madaddaalada ciyaaraha.
Sumadda 'MeeTion', oo si rasmi ah loo aasaasay bishii Abriil 2013, waa shirkad ku takhasustay teebabka farsamada dhexe ilaa sare, jiirka ciyaarta, iyo agabka durugsan ee e-Sport.
"Qof kastaa ha ku raaxaysto madaddaalada ciyaaraha" waa aragtida MeeTion. waxay si adag u shaqeynayeen si ay uga caawiyaan ciyaartoyda ciyaarta adduunka inay horumariyaan kumbuyuutarka ciyaaraha iyo khibrada jiirka. Waxaan ka abuurnay ururo iskaashi dhow gobolada kala duwan waxaanan qoto dheereynay qadka alaabada si aan uga dhigno alaabta MeeTion mid maxali ah.
Waxaan ilaalinaa isdhexgalka joogtada ah ee ciyaartooyda ciyaarta ee ka kala socota gobolada aduunka. Khibrada isticmaaleyaasha iyo cabashooyinka ku saabsan cilladaha wax soo saarka ayaa ah jihada aan u habeyno soo saarista alaab cusub Waxaan sidoo kale si joogto ah u raadineynaa habab cusub oo aan ku cusbooneysiin karno kuna dabaqi karno tikniyoolajiyad iyo qalab dheeri ah badeecadeena si aan uga dhigno kuwa adeegsadayaasha ah inay la kulmaan waayo-aragnimada cusub ee ay keeneen teknolojiyadda iyo qalabka cusub sida ugu dhaqsaha badan.
Tan iyo markii la aasaasay, MeeTion Tech waxay ku haysay heer koritaan la yaab leh warshadaha. MeeTion Tech waxay iibiyeen 2.22 milyan oo kiiboodar iyo jiir sanadkii 2016, 5.6 milyan oo kiiboodar iyo jiir 2017, iyo 8.36 milyan oo kiiboodar iyo jiir sanadkii 2019.
Astaanta MeeTion waxay ka timaaddaa "Xunzi · Emperors": beeralaydu way xoog badan yihiin laakiin karti yar yihiin. Kadib, adoo adeegsanaya cimilada, juqraafi ahaan, iyo xaaladaha aadanaha, waxay sameyn karaan wax walba. Fikradeeda ayaa ah in la siiyo ciyaarta xad dhaafka ah cimilada, juquraafi ahaan, iyo xaaladaha aadanaha si loo dhiso aragti furan, loo wada dhan yahay, iskaashi, iyo guul-guul hawlgal. Bishii Maarso 15, 2016, MeeTion waxay sameysay istiraatiijiyad istiraatiiji ah nidaamka deegaanka, sidaas darteedna waxay kor u qaadday dhismaha silsilad bey'adeed oo ka baxsan ciyaaraha elektarooniga ah iyadoo lala kaashanayo la-hawlgalayaasha shirkadda.
Waxaa naga go'an inaan soo saarno badeecadaha ugu tayada fiican qiimaha ugu tartanka badan. Sidaa darteed, waxaan si kal iyo laab ah ugu casumeynaa dhammaan shirkadaha xiisaynaya inay nala soo xiriiraan wixii macluumaad dheeraad ah.
Cinwaanka: Dhismaha 2, Hengchangrong High-tech Park, Huangtian, Xixiang Street, Degmada Bao'an, Shenzhen, Guangdong, Shiinaha.